Isu tatova nechinetso chitsva cheApple Watch: 'Tanga gore nerutsoka rwerudyi' | Ndinobva mac
Isu tatova nechinetso chitsva cheApple Watch: 'Tanga gore nerutsoka rwerudyi'
Mushure memwedzi mishoma umo takaona matambudziko eApple Watch achipfuura pamberi pedu tisingakwanise kuzviita, isu tichatanga gore sezvaraifanira kuva uye ndizvokutenderera mhete dzese nhatu kwemazuva manomwe akateedzana mumwedzi unouya waNdira 2020 tichawana kuwana iri bheji.
"Kutanga gore nerutsoka rwerudyi" anga anesu kwemakore akati wandei izvozvi uye izvi zvipingamupinyi zvekushambadzira sezvo zvichigona kuitwa panguva dzakatarwa uye kana zvikasaitika panguva ino hatichakwanise kuzviwana. Zuva reVakadzi reMarudzi Ose, Zuva rePasi, iro dambudziko reMwedzi weMoyo uye mamwe matambudziko akawanda Zvakafanana zvatove pane runyorwa rwevazhinji venyu, muchazosara musina kuita iri dambudziko here?
Kurudziro yemunhu wese ane yake Apple Watch
Zvirokwazvo vazhinji venyu munofunga kuti izvi zvemhete nezvipingamupinyi zveApple Watch ndeyebhuru, asi kana iwe ukangotanga nazvo zvinonetsa kurega kuedza kuwana zororo. Hazvina basa kuti unhanho ipi uye hazvina basa kuti unotanga riini chinhu chakakosha kufamba uye kuva nehupenyu hwakasimba kupfuura hwese, saka mhete idzi dzinoita sedzemombe asi dziri kutikurudzira kuti tifambe.
Muchiitiko ichi, kuzadzikisa chinetso "Kutanga gore nerutsoka rwerudyi" hakuise mitsara yenguva maererano nedzidziso, zvinangwa zvekuwedzera kana zvakafanana. Vashandisi vanofanirwa kuvhara mhete nhatu mukati mevhiki rimwe remwedzi waNdira uye isu tinobva tango wedzera menduru iyi nezvimiti zvavo. #CloseYourRings ikozvino yagadzirira vashandisi uye Kubva pazuva rimwe chetero, Ndira 1, unogona kuwana dambudziko iri. Izvo hazvioneke muChiitiko chiitiko panguva ino, asi isu tichazviona munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu tatova nechinetso chitsva cheApple Watch: 'Tanga gore nerutsoka rwerudyi'
Affinity Photo kukwidziridzwa kune Sidecar chimiro
Chikamu chitsva cheHupenyu chinoshamisa 19 chinosvika muna Zvita 2